Deg Deg:-Xarakada Al-Shabaab oo mar kale weerar ay dad badan ku laayeen ka fuliyay gudaha Kenya |
Deg Deg:-Xarakada Al-Shabaab oo mar kale weerar ay dad badan ku laayeen ka fuliyay gudaha Kenya
Sida ay baahiyeen Warbaahinta ku hadasha afka Xarakada Al-Shabaab, Dagaalyahano hubeesan oo katirsan Al-Shabaab ayaa markale weerar culus waxa ay ku qaadeen gudaha dalka Kenya halkaas ay ku dileen dad badan.
Idaacada ku hadasha Afka Xarakada Al-Shabaab ee Al Andulus ayaa saakay baahisay in howlgal xalay Dagaalyahano katirsan Al-Shabaah ka fuliyeen gudaha dalka Kenya ay ku dileen ku dhawaad 20-qof oo Kenyan ah ay ku jiraan Ciidamo Booliis ah.
Weerarka xalay Al-Shabaab qaadeen ayaa ka dhacay Duleedka Deegaanka MPKETONI oo habeen kahor Al-Shabaab weerareen kuna dileen dad kor u dhaafaya 50-qof oo isugu jira Shacab iyo Ciidan.
Sargaal ka tirsan Xarakada Al-Shabaab oo la hadlay Idaacada Al-Andulus ayaa sheegay in weerar mar kale ku qaadeen gudaha Dalka Kenya ayna ku dileen dad uu sheegay in ay cadaw ahaayeen ay ku jiraan ciidanka Kenya ee qaabilsan ilaalinta dhulka keymaha iyo duur joogta.
Dowlada Kenya ayaan wali ka hadlin weerarka labaad ee Al-Shabaab sheegeen in saacado gudahood ka geesteen gudaha Dalka Kenya , waxaana wali aad loo hadal hayaan weerarkii Al-Shabaab habeen kahor ku qaadeen deegaanka MPKETONI oo katirsan Jaziirada Lamu halkaas oo lagu dilay dad ka badan 50-qof sidoo kale lagu gubay Hoteelo iyo dhismayaal kale nolvadex without prescription, acquire dapoxetine.